Ubume beNtengiso yeDijithali | Martech Zone
Indawo yokuThengisa ngeDijithali
NgoLwesibini, Januwari 8, 2019 NgoMvulo, nge-7 kaJanuwari, 2019 Douglas Karr
I-2019 iqhuba isondela kwaye uguquko oluqhubekayo kwindalo yentengiso iyaqhubeka nokutshintsha indlela esenza ngayo intengiso yedijithali. Sele sibukele iindlela ezintsha zedijithali, kodwa ngokweenkcukacha-manani, ngaphantsi kwama-20% amashishini aphumeze iindlela ezintsha kwisicwangciso-qhinga sokuthengisa ngo-2018. Le faсt ibangela impikiswano: sibukele iindlela ezintsha ezilindele ukwenza amaza unyaka ozayo, kodwa ngesiqhelo, bambelela kwindlela endala.
I-2019 inokuba ngunyaka wokuzisa imikhwa emitsha yentengiso yedijithali. Oko kusebenze kwidijithali kunyaka ophelileyo akunakusebenza kulo nyaka. Kulabo bafuna ukufumana umbono opheleleyo weendlela, Iqela leNtengiso ye-Epom lithathe uhambo olunzulu lokungena kwintengiso yedijithali kwaye bafumana umbono opheleleyo weendlela esiza kuzingqina ngo-2019.
Iindlela zokuthatha eziphambili zabathengisi:
Ukuba awukaphambukisi uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kuthengiso lwenkqubo yemithombo yeendaba, i-2019 lithuba lakho lokugqibela lokwenza oko.
Abo bangathengi i-traffic ngokwenkqubo baya kuhlala belahlekelwa yimali ngelixa behlawulela ukuvela kunye nokuguqulwa.
Imakethi yedijithali ihambela elubala olupheleleyo kunye nokwenza ngcono (jonga nje indlela i-DSPs eguquke ngayo kunyaka ophelileyo).
Intengiso yeVidiyo iyekile ukuba yifomathi yentengiso yeprimiyamu- namhlanje yifomathi yentengiso ekufuneka isetyenzisiwe ukuqhuba ukubandakanyeka okuphezulu kunye nokuhambisa umyalezo wakho kubaphulaphuli ngokubanzi.
Imfono-mfono ifumana isabelo esikhudlwana kwipayi yedijithali, ke isikrini esiphathwayo siya kuhlala siyindlela efanelekileyo yokufumana abaphulaphuli bakho.
tags: 2019chitha intengisoIndawo yentengisoUbume beNtengiso yeDijithalikwi-infographicintengiso yeselulaInkquboIividiyo zentengiso zeedola